香港電台網站 : 電視|सांस्कृतिक सम्पदा – मानव परिदृश्य (Nepali Subtitle) 文化長河 - 山川行 (尼泊爾語字幕)
Tag: 文化旅遊,長江,神農溪,縴夫,巴東縣,टू जातका जनता,डुङ्गा खियाउने काम,बोट ट्र्याकरहरू,याङ्ट्जी घाँटी क्षेत्र,शेनोक्क्षी खोला
नुजिआङ नदीको किनारमा 19 शताब्दीमा पश्चिमी मिशिनरीहरू आए पछि बनेका धेरै चर्चहरू छन् । लिसू जातका जनतासँग लिखित भाषा थिएन । स्थानीय जनतालाई धार्मिक शिक्षा दिन सहयोग गर्न बेलायती मिसनरी जेम्स ओ. फ्रासरले एउटा लिपी विकसित गरे र अहिले उनीहरूले प्रयोग गर्ने बाइबल त्यही लिपिमा लेखिएको छ । इसाई चाँडै नै सो समूहको सबैभन्दा लोकप्रिय धर्म बन्यो । लिसू भाषामा गाइने चार भाग भएको एकल कोरलहरू पनि निकै प्रसिद्ध भएका छन् ।
फुगोङ्ग पहाडमा बालबालिकाहरू आइतबारे विद्यालय जान्छन् र लाओमुडेङ क्राइस्ट चर्चमा ईश्वरको भजन गाउँछन् । उनीहरूको आवाज बिलाउ हिउँ हिमाल र नुजिआङ नदी वरिपरि गुन्जिन्छ र सो स्थानलाई स्वर्गीय स्थान बनाउँछ । हरेक क्रिस्मास मान्छेहरू यो चाड मनाउन तोकिएको गाउँमा भेला हुन्छ । उनीहरू स्थानीय चर्चमा गाउँछन्, प्रार्थना गर्छन् तथा आफूले मिलेर पकाएका खानेकुरा खान्छन् ।
जुनिआङका इसाईहरू धूम्रपान तथा मादक पदार्थको सेवन गर्दैनन् । जब मिसनरीहरूले स्थानीय जनताहरूले पर्याप्त खाद्यान्न नभए पनि अन्नको प्रयोग गरेर रक्सी बनाएको देखे उनीहरूले खाद्यान्नको समस्या समाधान गर्न तथा स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्न नुजिआङका इसाईहरूले रक्सी पिउन नपाउने नियम बनाए । तर केही मान्छेहरूका अनुसार आफूसँग रक्सी पिउने पैसा नभएको कारणले गाउँलेहरू इसाई बनेका हुन् ।
अल्पसंख्यकलाई रक्सी पिउन निषेध गर्नु भनेको इसाई धर्मले दिने ठूलो चुनौती हो । तर नुजिआङका इसाईहरू आफ्नो धार्मिक जीवनको पालना गर्छन् ।
15-05-2017, सोमबार, 1730-1800
19-05-2017, शुक्रवार, 1130-1200
20-05-2017, शनिवार, 0630-0700
15-05-2017, 星期一, 1730-1800
19-05-2017, 星期五, 1130-1200
20-05-2017, 星期六, 0630-0700
फुजिआन जातका मान्छेहरू समुन्द्रको छेउमा बस्छन् । फुजिआनको जिआपु तथा निङ्डे र जापानको ओकिनावा एउटै अक्षांशमा पर्छन् । मध्यम स्तरको हावापानीले कृषि तथा माछा पालनलाई सहयोग गर्छ । सान्डुआओ खाडीमा हजारौं हेक्टरमा माछा पालन गरिएको छ । यी सबै मिलेर समुन्द्रमा तैरिरहेको सहर बनाएको छ ।
निङ्डे नगरको दक्षिण पूर्वमा रहेको सान्डुआओ फुजिआनको पूर्वी भागको प्रवेश द्वार हो । यो पाँच टापु र एउटा प्रायद्वीप मिलेर बनेको छ । यसको आकार कलशको जस्तो छ र यसको पानी शान्त छ । यो विश्वविख्यात प्राकृतिक बन्दरगाह तथा पहेँलो क्रोकर एक मात्र जीवित प्राकृतिक अण्डा पार्ने स्थलको रूपमा रहेको छ । यसबाट प्राप्त हुने प्रचुर माछाको कारणले यस ठाउँलाई पहेँलो क्रोकरको घर भनिन्छ । सन 1988 देखि कृतिम संसर्गबाट माछा उत्पादन गरिएको छ । हालसालै आबलोन जस्ता अन्य समुन्द्री खाद्यान्नहरूको पनि उत्पादन गरिएको छ ।
सान्डुआओको भित्री समुन्द्री भागको क्षेत्रफल 700 वर्ग किमी छ । यसमा 120,000 जाल छन् तथा यहाँ 12,000 मान्छे बस्छन् । पृष्ठभूमिमा पहाडले सुरक्षा दिने माछाका फार्महरूले सुपरमार्केट, सिपयार्ट, ग्याँस स्टेसन तथा प्रहरी थाना भएको एउटा पूर्ण समुदाय सृजना गर्छन् ।
यहाँको दिन विक्रेताहरूको डुङ्गाले त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई स्वच्छ खाना बेच्दै हिँडेर सुरु हुन्छ । बालबालिकाहरू डुङ्गाबाट विद्यालय जान्छन् । एकातिर मर्मत गर्ने कर्मचारीहरू व्यस्त हुन्छन् भने अर्को तिर माछा फार्ममा तीनवटा शयन कक्ष र एउटा बैठक कोठा भएको घर जडान गरिँदै हुन्छ । साँझमा माछा कृषकहरू आफ्ना माछालाई खाना खुवाउँछन् । यो सानो सहर व्यवस्थित भएर आफ्नो प्रत्येक दिन बिताउँछ ।
समुन्द्र रहस्यमय तथा उर्वर हुन्छ । समुन्द्रको जीवन छाल जस्तै हुन्छ । समुन्द्रका कृषकहरू समुन्द्रलाई जमिन जस्तो ठान्छन् । अन्यत्रका कृषक जस्तै यहाँका कृषकले पनि फल प्राप्त गर्नु अगाडि बीउ छर्नु तथा गोडमेल गर्नु पर्छ । समुन्द्रको छेउमा बस्ने मान्छेहरू सधैँ प्रकृतिको लय पछ्याइ रहनेछन् ।
08-05-2017, सोमबार, 1730-1800
12-05-2017, शुक्रवार, 1130-1200
13-05-2017, शनिवार, 0630-0700
08-05-2017, 星期一, 1730-1800
12-05-2017, 星期五, 1130-1200
13-05-2017, 星期六, 0630-0700
जाङ्गवान सहर, निङ्डे नगर, फुजिआनको डुङ्गा बनाउने परम्परागत प्रविधि 650 वर्ष भन्दा बढी हस्तान्तरित भएको छ । 40 भन्दा निर्माणकर्ताहरू लिऊ परिवारसँग सम्बन्धित छन् । उनीहरू आफ्नो सीप पुरुषलाई मात्र सिकाउँछन्, महिलालाई होइन । ती पुरुषहरूमा वरिष्ठ तथा सिकारु, बुबा र छोरा, काका र भतिज पर्छन् ।
जाङ्गवान सहरको क्विहौको लिउसको इतिहास अनुसार, पुर्खा लिउ डिमेइ मिङ वंशमा भएको लडाई छल्न समुन्द्रबाट निङ्डे जान मिनानबाट हिँडे । नयाँ स्थानमा बसोबास गर्न सुरु गरेपछि उनी डुङ्गा बनाउन थाले । उनको सीप त्यस पछिका 26 पुर्खामा सरेको छ । पानी नछिर्ने चिनियाँ फुचाउन डुङ्गाको प्रविधि टाङ्ग वंशमा सुरु भएको थियो । यो समुन्द्री इतिहासको माहानत्तम प्रविधि हो । डुङ्गा भित्रका कोठाहरू स्वतन्त्र हुन्छन् भने हलमा पानी छिर्दैन । गल्तीले कुनै चट्टानमा ठोकिए पनि ठोकिएको भाग मात्र नष्ट हुन्छ तर डुङ्गा डुब्दैन । यसको डिजाइनले यात्रुको सुरक्षालाई अधिकतम पार्छ र यसलाई 2010 मा राज्य स्तरीय सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा राखिएको छ । यसलाई सन तुरुन्तै सुरक्षा गरिनु पर्ने अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको सूचीमा राखिएको थियो ।
01-05-2017, सोमबार, 1730-1800
05-05-2017, शुक्रवार, 1130-1200
06-05-2017, शनिवार, 0630-0700
01-05-2017, 星期一, 1730-1800
05-05-2017, 星期五, 1130-1200
06-05-2017, 星期六, 0630-0700
साङ्जी प्रान्तको लिन काउन्टी नजिक रहेको तल्लो पहेँले नदीको किनारमा व्यापारी र तिनका खच्चर तथा घोडाहरूले भरिभराउ हुने सम्पन्न व्यापारिक बन्दरगाह हुने गर्थ्यो । यायोदोंग्स भनिने माटोका गुफाजस्ता घरका लागि प्रसिद्ध त्यो बन्दरगाह कुनै समय साङ्जी प्रान्तका व्यापारीहरूका निम्ति रणनीतिक स्थल थियो । 500 मिटर चौडा नदि अचानक साँघुरिएर 100 मिटर हुने भएकाले तथा बालुवा र चट्टान थुप्रिने भएकाले मान्छेहरू सो स्थानलाई किकोऊ भन्ने गर्थे, जसको अर्थ हिउँ मुख हुन्छ । सामान बोक्ने डब्बाहरू मध्ये सबै आकारका डब्बाहरू त्यहाँबाट पार हुन सक्दैन थिए । त्यसैले, तिनीहरू किकोऊ मै ओरालिन्थे अनि जमिनको बाटो हुँदै ओसारिने गरिन्थ्यो । व्यापारीहरू ऊँट, खच्चर र घोडाहरूमा ति सामान हरू ताइयुआन, शांघाई र अझ बेइजिंगसम्म पनि लैजाने गर्थे । अन्तत: पूर्वबाट आएका माल सामानहरू उत्तर पश्चिमतर्फ समुन्द्री मार्ग हुँदै ढुवानी गर्ने गरिन्थ्यो । मिंग वंशको अन्त्य तिर किकोऊ सहर व्यापारिक बन्दरगाह बन्न पुग्यो ।
गणतन्त्र चीनको सुरुवाती समय ताका त्यहाँ झन्डै 400 को संख्यामा व्यापारिक प्रतिष्ठान थिए । त्यति बेला यो शांघाई र बेइजिंग झैं प्रचुर थियो । तेल, नुन, जनावरको भुव तथा जडीबुटी सबैभन्दा बढी कारोबार हुने वस्तुमा पर्थे । तिलको तेलमात्रै बेच्ने कम्पनी पनि झन्डै 30 को हाराहारीमा थिए । एउटा लोक गीत थियो –“किकोऊमा तेल जताततै पाइन्छ । तिन दिनमा त सहर नै बगाउँछ होला ।” तर, इतिहासको आफ्नै चक्र हुन्छ - उकालो चढेपछि ओरालो पनि लाग्नुपर्छ । सन् 1950 ताका रेल मार्ग र राजमार्गहरू बनेपछि पीत नदीमा अत्यन्तै बाढी आउन थाल्यो, सहर सुनसान हुन लाग्यो । तर पनि साङ्जी प्रान्तका ति व्यापारीका सन्ततिहरू अझै पनि त्यो नदीलाई सुरक्षा दिइरहेका छन् ।
24-04-2017, सोमबार, 1730-1800
28-04-2017, शुक्रवार, 1130-1200
29-04-2017, शनिवार, 0630-0700
24-04-2017, 星期一, 1730-1800
28-04-2017, 星期五, 1130-1200
29-04-2017, 星期六, 0630-0700
टाईहांग हिमालको अत्यास लाग्दो उकालो चढ्दै गर्दा समुन्द्री सतहबाट 16000 मिटरमाथि ग्वालियांग नाम गरेको एउटा सुन्दर गाउँ देखापर्छ ।। यो विकट हिमाली भेगमा जीवन यापन गर्न फलाम भन्दा कठोर इच्छा शक्ति आवश्यक हुन्छ । टुप्पोमा पुग्ने दुई बाटाहरूले गाउँलेहरूको दुई पुस्तामा अन्तर्विरोधी तस्विर सिर्जना गरेका छन् ।
ग्वालियांग गाउँ हेनान प्रान्तको जिन्जियांग सहरको हुइजियांग भन्ने स्थानबाट 55 किमी उत्तर पश्चिममा पर्छ । पूर्वीय हान वंशको अन्त्यतिर जनताहरू कर्मचारी तथा जमिन्दार दुवैबाट शोषित थिए । तिनीहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर थियो । टाईहांगको ग्वालियांग भन्ने व्यक्तिले आफ्ना सेनालाई त्यहाँको टाकुरामा लगेर तालिम दिने योजना बनाई त्यसै अनुसार विद्रोह सुरु गरे । उनी ग्वालियांगको सम्झनामा त्यहाँका पछिल्ला पुस्ताले त्यस गाउँलाई ग्वालियांग भन्न थाले । प्रचुर मात्रामा स्रोतहरु नहुँदा नहुँदै पनि टाईहांग हिमालदेखि को ढुङ्गाका बार, ढुङ्गाकै पुल – पुलेसा, ढुङ्गे घर, ढुङ्गे टेबल र खाट समेत ढुङ्गाकै बनाए । त्यो “ढुङ्गे गाउँ” ले कठोरताको सुन्दरता झल्काउँछ ।
विगतमा गाउँलेहरू आकाशे सिँढीबाट उकालो –ओरालो गर्थे । गाउँलेहरूले मसला देखि चौपाया सम्मका आफ्ना सबै आवश्यकताहरू यही एकमात्र बाटोबाट पूरा गर्थें । सो आकाशे सिँढी मिंग वंशका पालामा बनाइएको थियो र किंग वंशका दाओग्वान्गका समयमा विस्तार गरिएको थियो । त्यो नागबेली सडक थुम्काको एकापट्टीबाट निकालिएको थियो । त्यो बाटोको कुनै स्थानमा त 0.4 मिटर सम्म साँघुरो थियो । कुनै व्यक्ति सो सडकबाट खसेमा ऊ हिमालमा पुरिन पुग्थ्यो । त्यो विकट स्थानको जन जीवन अत्यन्त कठिन थियो । स्कुल जाने, चिकित्सककोमा जाने तथा विवाह गर्न समेत समस्या हुन्थ्यो । त्यस गाउँको विकटता देखि आजित भएर युवाहरू त्यहाँ बाट बिस्तारै पलायन हुन थाले ।
17-04-2017, सोमवार , 1730-1800
(पुन: प्रसारण )
21-04-2017, शुक्रवार 1130-1200
22-04-2017, शनिवार, 0630-0700
17-04-2017, 星期一, 1730-1800
21-04-2017, 星期五, 1130-1200
22-04-2017, 星期六, 0630-0700
नुजीआंगको जिप्लिनको जीवनशैली 溜索飛人
नुजीआंग नदी टंगुला हिमशृंखलाको दक्षिणी मोहडाको जिरेपाइजबाट उत्पत्ति भएको छ । यसको माथिल्लो भागलाई तिब्बतीहरूले “नाकु” भन्दछन्, यसको अर्थ कालो नदी हो । यो युन्नान प्रान्तको गंगशान क्षेत्रको क्विनाटंग तर्फ बग्छ; त्यहाँ पुगेपछि यसलाई चिनियाँ भाषामा नुजीआंग नदी र नु भाषामा “नुमीगुआ” भनिन्छ । त्यसको पनि कालो नदी भन्ने नै अर्थ लाग्छ । 4000 मि. अग्लो बिलु हिमाल र 5000 मि. अग्लो गाओलिगंग हिमालको बीचमा रहेको उक्त स्थान 300 मि. लामो र दुवैतर्फ 40 डिग्री भन्दा केही बढी भिरालो स्थान हो । त्यहाँ लिसस, नस, डुलंग्स, बाइस तथा जांग्स जस्ता अल्पसंख्यक जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् । यिनीहरूले उक्त सुन्दर उपत्यकाको बाँच्नको लागि प्रतिकूल स्थिति रहेको स्थानमा खेतीयोग्य जमिन, घरहरू, चर्चहरू, नदी पार गर्ने तुइनहरू बनाएर जीवनलाई जिउन अभ्यस्त बनाएका छन् ।
नुजीआंग नदीमा डुङ्गा छैनन् । तिनको बदलामा मानिसहरू तुइन वा नदी माथि तन्काइएको डोरी मार्फत नदीको वारपार यात्रा गर्छन् । यहाँका मानिसहरूको जीवनमा सहजता ल्याउन नुजीआंगलिसु स्वायत्त क्षेत्रको सरकारले नदीमा पुल बनाउन लागेको छ ताकि त्यहाँका बासिन्दाहरू बिना जोखिम नदी तर्न सकून् । यो तुइनबाट नदी पार गर्ने यो प्राचीन तरीका छिटै नै जोखिमपूर्ण यात्रा रुचाउने यात्रीहरूको लागि मात्र प्रयोग हुने क्रियाकलाप बन्नेछ । यो कार्यक्रममा हामीले त्यहाँका आँटी गाउँलेहरू र तिनीहरूले पालेका जनावरहरूको पानीको छालमाथि तुइनमा झुण्डिएर नदी तरेर बजार जाने साहसिक यात्राका अन्तिम झलकहरू देखाउन चाहन्छौं । “तुइन डाक्टर” ले कसरी आफ्ना बिरामीहरूको हेरचाह गर्छन् भन्ने कुरा देखाउने छन्, साथै उनले गाउँले जनजीवनमा आइरहेका परिवर्तनहरूको बारेमा समेत थप जानकारी दिनेछन् । फलामको काम गर्ने दुई पुस्ताका व्यक्तिहरूले गाउँमै निर्मित तुइनमा मान्छे झुन्डिने अंकुश कसरी बनाइन्छ भन्ने बताउने छन् । उनीहरूले गाउँमा रहेका हरेक व्यक्तिहरूका लागि आवश्यक उपकरण बनाउने तरीका देखाउने छन् ।
प्रसारण सम्बन्धी जानकारी :
10-04-2017, सोमवार , 1730-1800
14-04-2017, शुक्रवार, 1130-1200
15-04-2017, शनिवार, 0630-0700
10-04-2017, 星期一, 1730-1800
14-04-2017, 星期五, 1130-1200
15-04-2017, 星期六, 0630-0700
टेरेसहरूमा किनाराहरू घुम्ने 人在山田
1200 बर्ष भन्दा अघि हनी जातीका पुर्खाहरूले कोदालोमात्र प्रयोग गरेर युन्नानको युआनयांगमा रहेको आइलाओ हिमाल आसपासको अप्ठेरो जमिनलाई फराकिलो खेतीयोग्य जमिनको फाँट बनाए । यसो गरेर उनीहरूले त्यो फाँटको चारैतिर घेरिएका टेरेस वरिपरि एउटा पर्यावरणीय प्रणाली निर्मित गरे जसले गर्दा यो एउटा मनमोहक प्राकृतिक दृश्य भएको कलाकारिताको नमुनाको सिर्जना भयो । यसबाट टेरेसको वरिपरि घेर्ने संस्कृतिको सुरुवात भयो ।
हनीहरूले त्यहाँ कीटनाशक औषधीको प्रयोग नगरीकन रातो धान फलाए । प्रत्येक वर्ष धान काट्ने समयमा सबैले धान काट्न र किनाराबाट घरसम्म ओसार्न सघाउँथे, जसको कारण धान काट्ने समय हनी जातिका मानिसहरू बीच सम्बन्ध गाढा बनाउने अवसर थियो । यो ठाउँमा धान उमार्नु अत्यन्त गाह्रो काम थियो । हिमालले मानिसहरूलाई चाहे जति खेत त दियो तर त्यही हिमालको कारण उनीहरूलाई काम गर्न कठिनाइ पनि भयो । हरेक टेरेसको एक खुट्किलो एक मिटर भन्दा अग्लो थियो । जसको कारण खेतमा माथि उक्लँदा र ओर्लंदा किसानहरूले खर्पन प्रयोग गर्न सक्दैनथे । उनीहरूले आफ्ना सामान सधैँ ढाडमा बोक्नु पर्थ्यो – उनीहरू इँट, बालीहरू र बच्चाहरू समेत डोकोमा बोक्ने गर्थे । ढाडमा बोकेको भारीका कारण उनीहरूको टाउको सधैँ अघिल्तिर निहुरेको हुन्थ्यो । यस प्रकारको कृषि जीवनले हनीहरूलाई दह्रा र नम्र बनाएको थियो ।
परम्परागत हनी भवनहरूमा खरका छानाहरू हुन्छन् । तर नयाँ पुस्ताले आधुनिक भवनहरू मन पराउने भएकोले च्याउ घरको नामले समेत चिनिने यी पुराना किसिमका संरचना भएका घरहरू हराउँदै गएका छन् । ली जिनसँग परिवारको जेठो छोरो हो । परिवारको पालन पोषण गर्न सेनजेनमा 15 वर्ष काम गरेर ऊ तीन वर्ष अघि मात्र घर फर्केको हो । पुर्ख्यौली घरले नयाँ र पुराना परिवार जोड्ने माध्यमको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले यी घरहरू बचाएर राख्नुपर्ने उसको तर्क छ । चाडबाडको समयमा परिवारका सदस्यहरू भोज खान त्यो पुर्ख्यौली घरमा भेला हुन्छन् र आफूले फलाएको रातो धानका परिकारहरू खान्छन् ।
03-04-2017, सोमवार, 1730-1800
07-04-2017, शुक्रबार, 1130-1200
08-04-2017, शनिवार, 0630-0700
03-04-2017, 星期一, 1730-1800
07-04-2017, 星期五, 1130-1200
08-04-2017, 星期六, 0630-0700
टेरेसहरूको चमत्कार 水田奧妙
लामो समयदेखि को परम्परागत संस्कृतिले आधुनिक सभ्यतालाई साँधै प्रेरित गर्न सक्छ । पृथ्वीको दश प्रतिशत मात्र समथर जमिन भए पनि साठी प्रतिशत पानी र तीस प्रतिशत पहाड-पर्वतहरू छन् । खाद्यान्न अभावको लागि टेरेस खेती वास्तवमै एउटा सम्भव समाधान हो ।
1200 वर्षभन्दा अघि, हानिहरूले, प्राचीन औजारको मद्दतले युङ्याङ् क्षेत्रको निर्जन आइलाओ पर्वतमालाको आकार रेखा सँगै टेरेसहरू बनाए । कैयौँ अज्ञात पूर्वजहरूको संयुक्त प्रयासले त्यो पर्वतमालालाई 170,000 एकड जमिनमा परिणत गरेको छ , जसले 300,000 भन्दा बढी गाउँलेहरूलाई खाद्यान्न प्रदान गरेको छ ।
खेतीको लागि पानी अत्यावश्यक हुन्छ । पर्वतमा जलाशय नभए पनि बादल र जङ्गल त्यहाँ खेतीपाती गर्ने पानीको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा उभिएका छन् । हानिहरूले रुखलाई आफ्नो अभिभावक भगवानको रूपमा लिन्छन् । रुखले पानी संचय गर्न सक्छ । एक हिसाबले रुखहरूप्रति को मानिसको सम्मानले पानीको स्रोतहरूलाई पर्वतहरूमा संरक्षण गरेको छ । आइलाओ पर्वतमालाको मुनि बग्ने होङ्घे नदीले जमिन-खण्ड लाई सदियौंदेखि आद्रता प्रदान गरिरहेको छ –पानी तलबाट वाष्पीकरण भएर माथि बादल र तुसारो बनेर पर्वतमालाको वरिपरि फैलन्छ अनि जङ्गलमा चिसिएर पानीको थोपा बन्छ र अन्त्यमा खोला बन्छ । पानी र जैविक मल कुलोमार्फत सङ्कलन गरेर जमिनमा सिँचाई गरिन्छ ।
27-03-2017, सोमवार, 1730-1800
31-03-2017, शुक्रवार, 1130-1200
01-04-2017, शनिवार, 0630-0700
27-03-2017, 星期一, 1730-1800
31-03-2017, 星期五, 1130-1200
01-04-2017, 星期六, 0630-0700
पीत नदी को किनारमा उभिदैं 守望黃河
पीत नदी चिनियाँ संस्कृतिको जन्मभूमि हो । यसको लम्बाई 5464 किमी छ र यसले 795,000 वर्ग किमी क्षेत्रफल ओगटेको छ । धेरै समय अघिदेखि धेरै समूहले यो नदीको किनारमा बसोबास गरेका छन्, र चिनियाँ सभ्यताको यो उद्गम विन्दुमा धेरै सांस्कृतिक स्वरूपहरू देखिएका छन् । चिङ्हाई फाँटको पूर्वपट्टि अवस्थित सुन्ह्वा सलार स्वशासित क्षेत्रमा बसेका एक लाख सलारहरू यसको जीवन्त उदाहरण हो । उनीहरूको सबै वस्ति र निशानीहरूलाई नदीको पोषणको आशीर्वाद प्राप्त भएको छ ।
पीत नदी शान्त नदी होइन । पहिलेका मानिसहरू यस नदीमा पुल बनाउन असम्भव छ भन्ने सोचाइ थियो । यद्यपि, आकार अनुसार दश टनसम्म यात्रु र मालसामान ओसार्न सक्ने भेंडाको छालाबाट बनेको एउटा परम्परागत सवारी डुङ्गाको मद्दतले सलारहरू नदी तर्न सक्छन् । सलारहरूले कोज्वान नामको बाजा बजाउँछन् । तामा र चाँदीबाट बनेको घोडाको टाप आकारको यो बाजा कागज च्याप्ने चिम्टी जत्तिकै सानो हुन्छ । यसको धून कारुणिक र कोमल हुन्छ ।
हिजरी पात्रो (इस्लामिक पात्रो) को बाह्र मध्ये दसौँ महिनामा कोर्बन पर्व, अर्थात् पशु-वध पर्व पर्दछ । यो परम्परागत इस्लामिक पर्व सलारहरूको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्व हो । यसको तयारी स्वरूप मानिसहरूले सम्मान देखाउनको लागि आफ्नो घर सफा गर्नु पर्छ । पर्वको दिन वयस्क मुस्लिमहरूले नुहाउनु पर्छ, धूप बाल्नु पर्छ र राम्रो लुगा लगाउनु पर्छ अनि बिहान सबेरै मस्जिद जानु पर्छ । परिवारले भोजनको लागि चौपाया, भेंडा वा ऊँट वध गर्छन्; मिठाई, केक, चाउचाउ आदि पनि बनाइन्छ र इष्टमित्रहरू तथा छरछिमेकीबीच आदान-प्रदान गरिन्छ । पीत नदी को किनारमा चिनियाँ संस्कृतिमा आफूलाई समाहित गर्दै गरेको आप्रवासी समूहको रूपमा, सलारहरूले आफ्नो संस्कृति पनि लोप नहोस् भनेर जगेर्ना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । आफ्नो विगतको समृद्ध र रङ्गीन संस्कृतिलाई फैलाउन उनीहरूले आफ्नो पहिचान यथावत् राख्ने र नदीसँगै बाँच्ने सबै प्रयत्न गर्छन् ।
20-03-2017, सोमवार, 1730-1800
24-03-2017, शुक्रवार, 1130-1200
25-03-2017, शनिवार, 0630-0700
20-03-2017, 星期一, 1730-1800
24-03-2017, 星期五, 1130-1200
25-03-2017, 星期六, 0630-0700